IMF & Bangiga Aduunka oo ku dhawaaqay talaabo farxad-galinaysa Soomaaliya.
March 25, 2020 NEWS 5
MUQDISHO(P-TIMES) – Hay’adda lacagta Aduunka ee IMF iyo Bangiga Aduunka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay Soomaaliya cagta saartay wadada deyn-cafiska, waxayna sheegtay in ay bilaha nagu soo wajahan horumar weyn gaarayso Soomaaliya.
IMF iyo Bangiga Aduunka ayaa sheegay in ay Soomaaliya natiijo wanaagsan ka gaartay hanaanka deyn-cafiska, ayna soo dhaweynayaan qorshaha horumarinta ee dalka.
IMF ayaa sheegtay in ay Soomaaliya 3 sanno gudahood laga cafin doono dhammaan deymaha ay dalalka caalamka ku leeyihiin oo gaaraysa $5.2Bilyan oo Dollar, haddana isbedel weyn lagu sameeyey.
Hanaanka looga shaqeeyey ayay sheegeen in ay dhacday labadii sanno ee lasoo dhaafay oo ay wasaaradda Maaliyada Soomaaliya door weyn ka ciyaartay sidii mar uun deynka looga cafin lahaa Soomaaliya, taas oo ay sheegtay in ay dhabaha u xaarayso in Soomaaliya hesho deeq cusub.
Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo khadka telfoonka kula hadlay madaxda Bangiga Aduunka & IMFta ayaa uga mahadceliyey garab istaagooda, isagoo sheegay in ay Xukuumadiisu ka dhabeyn doonto meelmarinta qorshayaasha muhiimka ah ee hadda loo baahan yahay.
Hanaanka deyn-cafinta Soomaaliya ayaa ah mid sii socda, waxaana muuqata in ay dhinacyada qeybta ka ah oo dhan hadda u diyaarsan yihiin in ay dalka soo kabana ka cafiyaan deymaha lagu leeyahay oo ka dhigay mid aan waxba horumar ah laga sameyn Karin.
Ka naxaw nafta waaaa !!! Kooxday Shiikh Shariif, Xasan Culusoe iyo Cabdi/shakuur hor boodayeen ee dawlada dhaliilayey ha ku quusteen.
Nolol & Nabad guul
Shacabka Soomaaliyeed guul
Marka hore yaanay ina moognaanin in bangiga adduunka iyo hayadda maaliyadda ee caalamigu ay yihiin mashaariic ganacsi ee ay mulkiileyaal qarsoon ka yihiin dowladaha iyo shirkadaha ganacsiga ee waddamada reer Galbeedka. Sida aan hubo kuwani ma laha arxan iyo asluub u qoran oo “dayn cafis” dhab ah lagu tilmaami karo. Sida aan u badinayo siyaabo maldahan ayaa wax loo macmilayaa aynu anagu ka jaahilsannahay macal madaxdeena xataa.
In ay ama ka qalleeyeen ama ka rafaceen mise ay khafiifiyeen ribadii duulsaarka ahayd oo xad dhaaf ahayd inta ay waxsoosaarka iyo dhaqaalaha dalku qummaati iskugu dubba dhacayaan. Macnuhu waxaa weeye in raasimaalkii deymahaasi dalka sidiisii weli loogu leeyahay laakiin siyaabo kale la isku la xisaabtami doono, sida kuwii wax deymiyay oo raasimaalkaas u diga roga hanti maalgashineed ee ay dalka kheyraadkiisa iyo waxsoosaarkiisa gacanta ugu dhigayaan inta aanay Shiinuhu, Ruushku, Carabtu mise Turkidu reer Galbeedka kaga hor marin. Casrigan aynu joogno waaxda maaliyadda iyo sarrifka caalamigu ma aha wax sahal lagu dhaadi karo.
1.Waa runtaa oo lacagaha la leeyahay waa la cafinayaa waxbaa ku hoos qarsoon.5.2 billion dollars of usd dadka sheeganayaa ma cafinayaan ee waxaa jira dhagar dahsoon.Meel kalaa wax loo badalayaa bay ila tahay.
2.Tan kale yaaqaatay lacagta intaas tiro le’eg?Ma waxaa soomaali qabtaa lacagta uu Xassan Shiikh Turgi uga gatay aqalka qaaligaa?Ma soomaaliweeyn baa lagu leeyahay lacagaha ay isticmaaleen madaxda USC?Waxa ay laaluush bixinayaan Ina farmaajo iyo maamulkiisu ma soomaali baa qabta?
Waxii la oran lahaa idinka isku qaatay.
Gaal iyo yuhuud wax ma cafiyaan. Gacan bay wax kugu siinayaan mida kalena intii in ka badan ayey kaaga qaadanayaan. Laakii general population waxaas ma fahmayaan. Waa iska dhaqaaqo ku nool. Qorshaan la magac baxay deyn caris waa dhac cusub oo somalia lagu dhacayo. DFS’na waxay ka tahay dulaaley. 800 boqol oo milyan ayaa DFS la siinaya marka qorshu isku daba dhaco. Ma laysweydiiyey meesha lacataasu ku dambeyn doonto. Isweydiin maleh oo waa muuqataa.
Aqyaarta waad wada salaamantihiin. Inkasta oo aanan wax badan ka aqoon dhaqaalaha iyo arrimaha ku xeeran, haddana waxaay wax iila muuqdaan sida aad u wada sharraxdeen.
IMF iyo world Bank kuma naqan wadan dunida sadexaad dadka aay ugu yeeraan ah in aay dhaqaalihiisu god ku ridaan mooyee, in aay ka saaraan.
Tankale haddiise aayba run noqoto oo deynta la cafiyo, oo mid cusubna la qaato, maxaay soo kordhineeysaa. Mar haddii laga maamulayo Muqdisho oo jidad iyo guryo burbursan oo Muqdisho ku yaal lagu dayactiri doono, soomaalidana lagu wada lahaan doono?
Soomaaliya waxaa u dan ah inta laga helayo isla xisaabtan dhab ah, in aanan deyntaana la cafin, mid cusubna aanan lasiin!!!!